ကိုယ်တော်၏မိုဘိုင်း Copywriting က Business အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန့်နှံ့
မူလတန်း sidebar ထဲကမှ Skip
Mobile ကို Optin ဆန်းစစ်ခြင်း
သငျသညျနီးပါးဆက်ဆက်သိကြသည့်အတိုင်း, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကောင်းသော copywriters အများကြီးရှိနေကြသည်မဟုတ်. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, ဒါကြောင့်တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအများကြီးကြာ, လည်းပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုပဲသာမန်မိတ္တူရေးသားဖို့. သင်ကိုယ်တိုင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ copywriter ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ပါလျှင်, ဒါဟာအလေ့အကျင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်နိုင်ပါသည်, များသောအားဖြင့်ကြာကြာကျွန်တော်တို့အများစုကများအတွက်. အဖြစ်ခက်ခဲသငျသညျကွိုးစားပါစေခြင်းငှါအဖြစ်, သငျသညျအစဉျအမွဲတတ်ကျွမ်းဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူသင့်သောအရာအားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါ. ကျိန်းသေတဲ့ရာသက်ပန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, လူအများစုသည်းခံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်အချိန်, ၌ထားရန်အလွန်ကြီးစွာသော copywriter ဖြစ်လာရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာ. ဤနေရာတွင်နေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမဆို copywriting မှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပြင်းထန်ထက်ပို.
သင်တစ်ဦး copywriter ဖြစ်သို့မဟုတ် compose ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်ဒီမှာသင်ပြုများအတွက်အမာခံလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်. ထို့နောက်စက္ကူပေါ်မှာချကူးယူသခင်ကရေးသားကြီးမြတ်မိတ္တူရှာဖွေတွေ့ရှိ. အချို့ပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ format နဲ့လက်ဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုရောင်းအားအကြောင်းအရာရေးပါ, သင်ကရပ်နိုင်နေသကဲ့သို့ပြီးနောက်အဖြစ်မြောက်မြားစွာကြိမ်ကြောင်းပြုပါ. ပိုငျသညျကပိုမိုမြင့်မားလုပ်နေတာ. သငျသညျအရေးယူငါးဆယ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူနိုင်ခဲ့. သငျသညျထပ်ခါထပ်ခါဒီမိတ္တူကိုရေးသားလိုက်တဲ့အခါ, သင်တစ်ဦး copywriter တစ်ဦးရေးသားလိုကျသောအခါတူသောစဉ်းစားရန်စတင် မိုဘိုင်း optin ဝဘ်စာမျက်နှာ. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလည်းတဦးတည်းတူသောရေးသားဖို့ဦးတည်းလေ့, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်သောအချိန်ပေါ်လျှော့ချတစ်လမ်းပါရှိသည်. တစ်ဦးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောမိုဘိုင်း copywriter အဖြစ်, သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးချင်းစီမှပြမှမှာအားလုံးအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သင်တစ်ဦးအစုစုကိုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်တော်တော်များများအားလုံးလည်းမရှိကယ့်. သင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်သငျသညျယခုထူထောင်ကြသည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ် spec အပေါ်ရေးရန်ဖြစ်ပါသည် – ဒီသင်သို့မဟုတ်အဘို့အပေးဆောင်ရမရစေခြင်းငှါ, စေခြင်းငှါအလုပ်ပြီးမြောက်ရန်ကိုဆိုလိုပါသည်. သင်တို့အဘို့ရေးထားကုမ္ပဏီက likes အကယ်., သူတို့ကလုပ်နေတာဘို့သင့်ကိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ. ဒါဟာသင်လိုအပ်သောအသိပညာနှင့်အတူသငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်, သင်တစ်ဦး Dime မရဖြစ်ကောင်းလုပ်နေကြလျှင်ပင်. အမြဲအပြုသဘောဖြစ်နှင့်သင်ရှိသည်သောတိုင်းအတှေ့အကွုံကိုကြည့်ဖို့သင့်ထံမှအသိပညာရရှိခဲ့ဘူးသောအရာတစ်ခုခုသည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ထက်ပို, သင့်ရဲ့စီမံကိန်းများကိုပယ်ချလိမ့်မည်, သင်တန်း၏မဟုတ်လျှင်သင်တစ်ဦးပါရမီရှင်စာရေးဆရာတွေဟာ.
သငျသညျစျေးကွက်သင်ယူခြင်းအားဖြင့်မိတ္တူအရေးအသားလုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်. ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ပါစို့. သငျသညျနယ်ပယ်သီးခြားစျေးကွက်ပစ်မှတ်ထားကြောင်းမိုဘိုင်း optin ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည် Do? ရဲ့အရင်ကဆိုရင်အဲဒီမှာကိုစတင်ပါစို့. ဒီတော့အွန်လိုင်းဖိုရမ်များကိုသွား, သို့မဟုတ်သင်ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်လူအပေါင်းတို့သည်စျေးကွက်များတွင်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများရှာတွေ့. သင်သည်သူတို့အမှန်တကယ်အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ခြင်းငှါအလိုရှိ, သူတို့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုခုကိုးကားသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ဖော်ပြလမ်းကို. တိကျသောပြောပြလိုပါသည်သင်ယူဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာသို့မဟုတ် ဤအနယ်ပယ်စျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုဗန်းစကား. ကောင်းမွန်သောဤအရောင်းစာမျက်နှာမိတ္တူရေးသားခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကူညီပေးပါမည်. သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျသက်ရောက်မှုများအတွက်ပဲသူတို့ကိုကဲ့သို့သင်တို့အပရိသတ်ကိုအသံနဲ့စကားပြောနိုင်တော့မည်ရန်ရှိသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအကျိုးစီးပွားယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့နောက်ခံနှင့်အတူလုပ်ဖို့ခဲမဆိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နားလည်မှုအတိအကျဘာနားလည်လိုင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အကျိုးမပေးနိုင်နိုင်ပါသည်လမ်း. သငျသညျစာသားတစ်ဆပ်ကပ်သဘင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးလောကအတွင်းဂရုစိုက်မယ်လို့. တဦးတည်းအရာနားလည်ရန်တစ်ဦးတည်းသာ: တဝေးပိုပြီးအမြတ်အစွန်းရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကထက်အောင်နိုင်သည်ကို. ဒါကြောင့်, ရဲရင့်ဖြစ်အဲဒီမှာထွက်ရတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်အောင်.
မူပိုင်ခွင့် © 2017 · ကမ်ဘာ​​ဥ​​ီးကမူဘောင် · WordPress ကို · လော့ဂ်အင်